भर्खरै सप्तकोसीमा डेन्जर बा’ढी – 40 ढोका खोलियो: छिनभरमै डुब्यो बिहार! ढोका वन्द गर्न मोदिको बिन्ती | Public 24Khabar
Home News भर्खरै सप्तकोसीमा डेन्जर बा’ढी – 40 ढोका खोलियो: छिनभरमै डुब्यो बिहार! ढोका...
भर्खरै सप्तकोसीमा डेन्जर बा’ढी – 40 ढोका खोलियो: छिनभरमै डुब्यो बिहार! ढोका वन्द गर्न मोदिको बिन्ती
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको १७ किलोमा सडक थप भासिएपछि सवारी साधन एकतर्फि सञ्चालन गरिएको छ। आज बिहान भासिएको सो ठाउँमा ग्राबेल हालेर दुईतर्फी यातयात सञ्चालनका लागि काम भइरहेको छ।
डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख कृष्णराज अधिकारीका अनुसार यसअघि भासिएको ठाउँमा थप भासिएपछि समस्या भएको हो। सो सकडखण्डको १७ र २६ किलो भन्ने स्थानमा सडक बिस्तार गरेको एक वर्ष नपुग्दै भासिएका थियो।
उनले १७ किलोमा तीनदेखि ३ दशमलब ५ मिटर फराकिलो ३५ मिटर लामो क्षेत्रमा एक फिटजति सडक भासिएको बताए। सो ठाउँमा सडक नौ मिटर फराकिलो छ। सडक ग्राबेलिङ गरेपछि दुईतर्फी सवारी सञ्चालन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।
सो ठाउँमा विसं २०६० मा सडकमुनिबाट एङ्कर वाल दिएर निर्माण गरिएको थियो। यसैमा समस्या आएको जनाइएको छ । सो क्षेत्रमा तलबाट त्रिशूली नदीले काटेका कारण एङ्कर वालले काम गर्न छाडेको हो।
दुई वर्षअघि सो सडक विस्तारको काम गरिएको हो। सडक निर्माण गरिएको एक वर्ष नपुग्दै सो ठाउँ र २६ किलोमा ६ दशमलव ५ मिटर फराकिलो सडक ७० मिटर लामो भाग भासिएको छ। ती दुवै ठाउँमा मर्मतका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको भए पनि बोलपत्र नपरेको सडक विभागले जनाएको छ।
ठेक्का नपरेपछि यस वर्षको वर्षात्मा पनि यत्तिकै सडक सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हो । भासिएको क्षेत्र बढेमा वर्षात्को समयमा समस्या आउनसक्ने अनुमान गरिरहेका बेला सो ठाउँमा सडक थप भासिएको हो। यस सडक राजधानी भित्रने र बाहिरिने प्रमुख मार्ग हो। सडकमा दैनिक १० हजार सवारीसाधन आवागमन गर्ने गर्दछन्। रासस
Previous articleम्याग्दी पहिरो : ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या २८ पुग्यो, मराङमा १९ जनाको सामूहिक अन्त्येष्टि
Next articleफाट्टफुट्ट गुड्न थाले सार्वजनिक बस